शुल्कमा मनोमानी : निजी कलेजद्वारा लाखौं असुली – Online National Network
८ माघ २०७४, सोमबार ०२:३१
काठमाडौं, ८ माघ – २१ लाख २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ भौचरमार्फत चितवन मेडिकल कलेजको खातामा पठाएका उज्ज्वल भट्टराई एमबीबीएसमा भर्ना भइने भो भन्नेमा ढुक्क थिए। तर, अहिले उनी चिन्तामा छन् । पढ्न पाउने/नपाउने के हो भन्दै उनी दुई दिनदेखि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा डिन खोज्दै हिँडेका छन् ।
मेरिट (योग्यता) सूचीका आधारमा नाम निकालेका भट्टराई सरकारले तोकेकै शुल्कमा पढ्न पाइनेमा निश्चिन्त थिए । रकम कलेजको खातामा पठाएपछि भर्ना हुन खोज्दा ६ लाख रुपैयाँको चेकसहित सर्टिफिकेट लिएर आउन भनेपछि उनी चकित परे ।
भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘केका लागि थप ६ लाख बुझाउनुपर्ने हो भनेर प्रश्न गर्दा यस्तै छ यहाँको चलन भन्ने जवाफ पाए ।’ त्यसपछि उनी आईओएममा कति रकम दिनुपर्ने बुझ्न डिनलाई खोजिरहेका छन् ।
भक्तपुर लोकन्थलीका भट्टराईलाई मात्र होइन, कडा मिहिनेत गरी मेरिटका आधारमा नाम निकाल्न सफल दर्जनांै विद्यार्थीलाई निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क मागेपछि चिन्तित देखिन्छन् ।
पर्साका कृष्णप्रसाद साहलाई पनि अतिरिक्त रकम कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता छ । आईओएममा मेरिटका आधारमा ५९ नम्बरमा नाम निकालेका उनलाई किस्ट मेडिकल कलेजले थप शुल्क लाग्ने बताएपछि बैंक भौचरमार्फत रकम नै पठाएका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले तोकेको भन्दा थप शुल्क लिन्छन् भन्ने साथीहरूबाट सुनेपछि बुझ्न खोजें । पारदर्शी नै भएन ।’
तर, कसैले वास्ता नगरेपछि निन्याउरो अनुहार लगाउँदै घर फर्कने गरेका छन्। डिन कार्यालयका कर्मचारीले हामी केही गर्न सक्दैनौं । सरकारकै कमजोरी हो भन्ने जवाफ दिने गरेको पीडित विद्यार्थी बताउँछन् । किसानको छोरा भए पनि डाक्टर बन्ने सानैदेखिको सपना पूरा गर्न मिहिनेत गरेको उल्लेख गर्दै साह भन्छन्, ‘सरकारले तोकेकै शुल्क तिर्न पनि घरजग्गा बेच्नुपर्ने स्थिति छ। थप २०/२५ लाख कहाँबाट जुटाउने ? ‘ छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न आफूले दुई वर्षदेखि रातदिन कडा मिहिनेत गरेको उनले बताए ।
उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपत्यका बाहिरका कलेजले ४२ लाख ५० हजारसम्म शुल्क लिन सक्ने प्रावधान छ । तर, ५० देखि ६० लाखसम्म लिने गरेको पीडित विद्यार्थी बताउँछन् । महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति डा. मिलन गैरे निजी मेडिकल कलेजले मनपरी शुल्क लिने गरेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पीडित विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउन सडकदेखि न्यायालयसम्म पुग्न पनि तयार छौं ।’ आईओएमकी सहायक डिन मन्दिरा वन्त निजी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिन नहुने बताउँछिन् । गण्डकी मेडिकल कलेजले पनि थप शुल्क लिएको भन्ने गुनासो गर्दै विद्यार्थी उनीसमक्ष आएका थिए ।
सहायक डिन वन्त भन्छिन्, ‘मौखिक रूपमा गुनासो आएको हो। पीडितले लिखित रूपमा केही दिएका छैनन् । पीडितले लिखित निवेदन नदिँदासम्म थप बोल्न मिल्दैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाँ मेरिटमा नाम निकालेका विद्यार्थीले भर्ना हुन कलेजमा पैसा दिन नपर्ने बताउँछन् ।
तर, निजी कलेजहरूले मागिरहेका छन् नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘मेरिट बेसिसमा अनलाइनमार्फत भर्ना हुन पाउँछन् । भर्ना हुन कलेज जानै पर्दैन । एक पैसा पनि बढी दिनु पर्दैन। त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौं ।’ – अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक